पर्दा उघ्रिएपछि | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
जेठ ८ गते, २०७३ - १२:५५
उफ ! पाँचवटा तल्लाको भर्याङ पनि किन योविधि लामो भएको होला ? जत्ति ओर्लिए पनि किन नसक्किएको होला भ¥याङ्कको शृङ्खला ? दायाँ हल्लिएको छ, बायाँ हल्लिएको छ । मजबुतीका साथ समात्दा पनि आफ्नै शरीर थाम्न सकिरहेको छैन । भर्याङ ओर्लिनेक्रममै चक्कर लागिसक्यो । पेट हुँडलिएर बान्ता होला होलाभैंm भइरहेको छ । आत्तिएर दौडिँदा चियाको ग्लास बोकेरै दौडिएछु । आफैले बोकेको ग्लासबाट पोखिएको चियामा चिप्लिएर एकैचोटि तीन खुड्किला तल झर्दा खुट्टा धसारिनु र शरीर थाचारिनु एकैचोटि भएकोले पीडाले मरणान्त भएर म त भ¥याङ्कको आधा बिसौनीमै लोट्न पुगेछु ।
‘के भयो सर, हजुरलाई गारो भयो ?’— संस्कारको प्रश्नको जवाफमा मैले केही बोल्नै सकिन बरु पीडा अाँसु बनेर अाँखाबाट छचल्कियो । उसले मेरो जवाफको प्रतीक्षा नै नगरी मलाई दूधे बालक झै जुरुक्क उठायो र भर्याङ ओर्लिन थाल्यो । हामी खुल्ला चौरमा पुग्दा आज बैशाष २९ गतेको त्रास अाफै थामिएको थिएन । संस्कारले मर्किएको मेरो गोडा तनाकतुक पारिदिएकोले मैले अलि राहतको अनुभव गरिरहेको थिएँ । अहो ! कार्यालय त खुल्लै छाडिएछ । मनै चिसो भयो । मेरो मनको कुरो बुझेभैं संस्कार कार्यालयतिर दौडियो ।
निजी प्रतिष्ठानमा मभन्दा तीनचार तह मुनिको कर्मचारी संस्कारको बोली, वचन र व्यवहार मलाई कहिल्यै निको लागेन । उसको छवि पैसालोलुप र अल्छीको भन्दा गुणस्तरीय थिएन नै । त्यसैले तीन बर्षे कार्यकालमा उसको र मेरो सम्बन्ध औपचारिकताभन्दा अघि बढ्न सकेन । तर बैशाष १२ गतेपछिको दिन अर्थात् आज फेरि एकपटक धर्ति थर्किरहेको बेलामा कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरु कता गए र यो संस्कारमात्र मेरो नजीक छ ? भयभीत भएर ज्यान जोगाउँन भाग्ने क्रममा कर्मचारीहरुको तलब बाँड्न ल्याएको तीन लाख चालीस हजार रुपैया, आई फोन र गाडीको साँचो पनि छाडेर भागिएछ, जुत्ता लाउने त झन कसको होस् हुन्थ्यो र ? त्यहीबेलामा संस्कारले पैसा, मोवाइल र गाडीको साँचो ल्याएर मेरो हातमा राखिदियो । मैले उसलाई हेरिरहँदा उसले अर्को हातले मेरो जुत्ता पनि म नजिकै राखिदियो ।
‘संस्कार ….। ’— म उसलाई धेरै कुरा भन्न चाहन्थें तर भाव अनुकुलका शव्द मैले भेटिरहेको थिइनँ । के मानिसलाई चिन्न एउटा शताव्दीको दोश्रो ठूलो भूकम्पको आवश्यकता पर्छ ? के म यस्तै सोचिरहेको थिएँ ?
जेठ ८ गते, २०७३ - १२:५५ मा प्रकाशित